Wafdi uu hoogaaminiyo PM Dr. Maxamed Cabdullahi Maxamed oo uu ka mid yahay Eng. Cabdiraxman Omar Osman Yariisoow ayaa dhawaan socdaal gaaban ku soo gaaray magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka. Ra’isal wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay la kulmayeen madax sare oo ka socota Wasaaradda Arrimaha dibedda dalka Mareykanka oo uu ka mid yahay Johnnie Carson oo ah Assistant Secretary of State for African Affairs.
Dhanka midig ka bilow, Ra’isal Wasaare Dr. Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmajo) iyo Prof. Liban A. Egal. Mr. Egal ayaa sheegay in ay dhaqaalahaas baxsheen qurba joogta iyo shaqsiyaadkii dhisay Hay’adda. Prof. Liban ayaa waxuu kaloo sheegay in Barnaamijyada cusub ee ay hay’addu ku howlan tahay ay ka mid yihiin sidii ay gacan buuxda uga geysan laheyd xagga caafimaadka, abaaraha, dhismaha, iyo nabadda.